Ezigbo snịịka - maka ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọ, na-acha ọcha, nwa, elu, enweghị lacing, maka ọkọchị, ikpo okwu, isi awọ, Adidas, Nike, Gucci, Vans
N'agbanyeghị na ịdị mfe na nkwekọrịta nke ụdị ahụ, akpụkpọ ụkwụ ndị dị ka ndị na-agba ígwè bụ n'ezie otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'oge a. Oge ndị ahụ bịara mgbe ejiji achọghị ịchụ àjà, mgbe ezigbo yabasị abụghị naanị mma, kama ọ dịkwa mma. Ndị sneakers na-emepụta ihe nwere ike ịgbakwunye ma ihe dị mfe ma dị irè, na ụta kachasị mma ma dị mgbagwoju anya.
Ndị na-eji ígwè sneakers 2018
Ndị na-emepụta sneakers na-arụ ọrụ dị egwu, ha niile ga-adịkwa mkpa n'oge ọhụrụ. Ụdị a nwere ihe a na - ahụ anya - a na - agbanye ụkwụ na nke a na - emepụta nke roba, nke a na - eji akwa ákwà ma na - agbazi ruo n'elu. E nwere ike ikwu na ndị na-eme ochie nwere ike ịsị na ha bụ ndị sneakers, nke ihe ndị ọzọ dị ka akpụkpọ anụ ma ọ bụ ndị ọzọ. A na-ele elu dị elu n'elu ikpere ụkwụ dịka ọkọlọtọ, ma ndị na-emepụta ihe, maka ndụ dị ogologo nke ụdị akpụkpọ ụkwụ egwuregwu , gbanwere ọdịdị ha.
Ndị na-eji ígwè sneakers 2018 nwere ọdịdị a na-ahụ anya, ma ọ bụ ihe odide oge a. Ndị na-emepụta ihe na-akwado ha site na ihe ndozi na-adịghị ahụkebe na ngwọta agba agba. Dịka ọmụmaatụ, ihe dịka okpokoro akpụkpọ ụkwụ, na agba ma ọ bụ ihe onwunwe dị iche iche, na-adagharị ma na-enwe mmasị na-emepụta ihe eji eme. Ọdịdị dị elu nke ngwaahịa ahụ dịkwa mkpa. Chọrọ dị ka obere ụdị, nke dị mma na-eyi n'oge okpomọkụ, na-emetụta maka oyi na mgbede na oge-oge. Oge a, ị nwere ike ịhụ ọnọdụ dị iche iche maka ihe dị iche iche nke ihe ndozi, akwụkwọ ntanetị na nke mbụ. Ndị na-eji ejiji sụgharịa ndị inyom 2018 - ndị a bụ ụdị ejiji:
Ihe oyiyi eji eme ihe na sneakers 2018
Ụdị ejiji kachasị ọhụrụ na-ejikọta ụdị dị iche iche na otu ihe oyiyi, na -eme ya dị mma ma dị irè, nke na-akpachara anya na-akpachara anya, ma n'otu oge ahụ, "ọ tọrọ ụtọ." Ihe edeputara na ndi mmadu a bu ndi mmadu eji eme ka ndi mmadu na ndi mmadu nwere ike ime ka ha tinye aka n'ime oku ahu, dika ihe obula di. Ihe mgbawa ahụ bụ na akpụkpọ ụkwụ a na-enyere aka ịmepụta ihe pụrụ iche, pụrụ iche, pụtara ìhè na n'otu oge ahụ ụta nke ọma. Na-ejikọta ha na ihe ndị yiri ka ha na-ekwekọghị ekwekọ, ị ga-enweta ihe kachasị na ọ bụghị ụdị ejiji na nke oge a.
Ihe dị mkpa bụ eziokwu na enweghi ihe mgbochi ọ bụla maka ịkpụ sneakers. Ha na-ele anya obere ụmụaka, ha na-eto eto maka ntorobịa na-arụsi ọrụ ike na maka ụkwụ nke ndị okenye nke ụmụ nwanyị. Mana ọ bụrụ na ị nwere ike ịhọrọ nrịanya kachasị ike maka nhazi na agba, mgbe ahụ, a ga-ahọrọ ndị ikpeazụ ka ha nwee ụdị ndị ọzọ. Ma n'icheba n'eziokwu ahụ bụ na otu n'ime ndị kasị ewu ewu bụ ndị na-acha ọcha sneakers ọcha 2018, ị nwere ike ịnọ na-emekarị ọ bụla afọ. Iji mepụta oyiyi n'ezie, enwere ọtụtụ nhọrọ dị mma:
A na-enwetakwa ụta na-emepụta ihe na sneakers site na ijikọta ha na ihe ndị dị na ụdị nke oké elu. Ọ nwere ike ịbụ ọsụsọ, uwe, T-shirts na ọbụna mkpuchi.
Egwurugwu, uwe mkpịsị na ejiji denim dị mma maka ịmepụta kwa ụbọchị ma n'otu oge ahụ ihe oyiyi dị mma. Were ya na uwe elu ma ọ bụ uwe akwa, ọ ga-emesi ike ịlụ nwanyị.
Ha nwere ike ịchọta ihe dị iche iche n'ogologo nke igwe, ogologo sara mbara, akwa ejiji ma ọ bụ uwe elu elongated. Ndị uwe ojii mara mma nke mara mma nke mara mma na ihe yiri ya na ụdị oge.
Eyịm ndị nwere mmasị ga-apụta mgbe ha jikọtara ya na sneakers pants culottes, uwe akwa na mgbakwunye na jaket ma ọ bụ jaket. Tinye ụdị akpa ahụ a na-eji ejiji ugbu a na onyinyo nke oge a.
Ndị na-emepụta sneakers maka ụmụ agbọghọ
Ná mmalite, a na-eche ha nanị maka egwuregwu ma na-eyi ọtụtụ ụmụ nwoke anya. Otu n'ime ụdị ndị a ma ama bụ Converse All Star. Ọ bụ akpụkpọ ụkwụ maka ndị egwuregwu basketball. Ma ka oge na-aga, ha banyere ndụ kwa ụbọchị ma gbanye mkpọrọgwụ na ya. Kurt Cobain n'onwe ya na-eyikarị Ndị Conversers, nke a si na ya ghọọ akụkụ dị mkpa nke ụdị grunge. Site n'enye ha nkasi obi na nkasi obi, ha huru ala oma ahu n'anya, ha bu ihe di nkpa nke uwe ha. Ụdị akpụkpọ ụkwụ ndị inyom a na-eji ejiji, ụmụ agbọghọ, na-ebi ndụ ndụ, na-enwe obi ụtọ ịbanye na ha.
Ndị na-agba chaa chaa mara mma
Ndị sneakers dị elu na-eleba anya dị ka ihe dị iche iche ma ọ bụ obere uwe ejiji ma ọ bụ uwe akwa, na-eji ejiji na uwe dị iche iche. Kwesịrị ekwesị maka mgbede oyi na-acha oyi na uwe zuru oke na njedebe oge. A na-anọchite anya sneakers kachasị mma na elu elu nke ndị a ma ama dịka: Nike, Givenchy, Vetements, Axel Arigato, Converse na ọtụtụ ndị ọzọ. Ụfọdụ kwenyere na ụzọ a na-ahụ anya na-eme ka ụkwụ dị mkpụmkpụ karịa ya, ya mere ha na-adabara ụmụ agbọghọ toro ogologo. Ma ndị stylists gọnahụ nkwenkwe a, na-ekwu na uto ahụ adịghị mkpa.
Ndị na-emepụta snịịka na-enweghị ihe ọ bụla
Maka akpụkpọ ụkwụ a dị ogologo, ha gbanwere mgbanwe dịgasị iche iche. Na ọkwa na oge gboo, ndị na-eji ígwè ígwè ígwè, ndị na-enweghị anụ ụlọ. Nke a dị mfe, n'ihi na ọ dịghị mkpa ka ị dabere na oge igbu oge, iji tie ma ọ bụ wepu ha oge ọ bụla. Ndị na-agba ọsọ, ndị stylists na-akpọ ndị na-agba ígwè na-enweghị ụlọ, na-etinye niche ha na akpụkpọ ụkwụ. Ha na-ele anya nke ọma ma dị iche iche, karịsịa ndị na-acha ọcha skeakers. Na ime nke a, ha dị nnọọ mma ịnọ n'oche ha. E gosipụtara ya na agba dị iche iche, nbipụta na ihe ndozi. A na-ejikarị ụdọ rọba na-agbakwụnye n'akụkụ, nke mere na ụkwụ dị mfe ịbanye n'ime ha.
Egwuregwu ndị na-eme ihe nkiri
Na mgbakwunye na agba na ihe ndozi, ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ, nna ukwu dị ka "egwu" na ọdịdị nke akpụkpọ ụkwụ ahụ. N'ihi ya, e nwere ndị na-agba ígwè n'elu ikpo okwu, bụ ndị ngwa ngwa malitere iji. Maka ụmụ agbọghọ na-eto eto, akwụkwọ a aghọọla chi, ha na-etinye ihe dị ka sentimita abụọ na mbara igwe ma ghara ịnapụ nkasi obi na nkasi obi, dị ka akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ . Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe ndị ọzọ na-acha uhie uhie na ihe ntanetị, jikọta, dịka ọmụmaatụ, ndị na-eji ejiji akpụkpọ anụ ejiji na-acha odo odo, elk ma ọ bụ ogologo ọkpa nke otu agba. Nchikota akpụkpọ ụkwụ na uwe na-enye gị ohere ile anya "gbatịkwu" ụkwụ.
Ndị na-agba chaa chaa na-acha odo odo
Okpokoro nke kachasị mma bụ ihe dị mma maka ịkwa ahụ kwa ụbọchị, ya mere, ihe nlereanya a bụ nnukwu ihe ịga nke ọma n'etiti ụmụ nwanyị ejiji eji kpọrọ nkasi obi. Maka ọtụtụ akụkụ, ndị na-ege ntị na-ege ntị bụ ndị na-ahọrọ ịke a bụ ụmụ agbọghọ na-achọ ịnọ na nchịkọta nke ejiji akpụkpọ ụkwụ. Site n'enyemaka nke otu usoro ha na ha, ị nwere ike ịmepụta magburu onwe ya na-adị kwa ụbọchị na ụta ịhụnanya. Ụdị ọcha ma ọ bụ nke na-egbukepụ egbukepụ bụ ndị sneakers ejiji maka oge okpomọkụ, nke dị mma na mkpụmkpụ, obere skirts na ọkụ sarafans. Enwere ụdị maka ọnwa oyi na-acha aji.
Ejiji akpụkpọ ụkwụ
Ịhọrọ ụzọ kwesịrị ekwesị dabere n'ọtụtụ ihe - site na ụdị uwe ị na-ahọrọ, site na nchịkọta, site na mmasị na-atọ ụtọ na ego enyere maka ịzụta dị otú ahụ. Ndị sneakers nwere ụdị ejiji, ọ bụ ezie na ọ bụghị nhọrọ kachasị ọnụ ahịa, ma ha nwere ọtụtụ uru karịa ndị ibe na ego na-adịghị akwụ ụgwọ. A na-eme ha ihe dị elu nke na-eme ka akpụkpọ ụkwụ na-eku ume ma banye mmiri, nke mere ka ụkwụ ghara ikpuchi oke mgbe ị na-aga ije. A na-enye ihe nlereanya dị otú a na-ewu ewu na nchịkọta nke ụlọ ejiji mara mma, dịka ọmụmaatụ:
E ji ezigbo akpụkpọ anụ na-acha ọcha akpụkpọ anụ na-acha ọcha akpụkpọ anụ na-acha ọcha akpụkpọ anụ na-acha ọcha akpụkpọ anụ, na Velcro sara mbara ma na-ekpo ọkụ sitere n'aka Alexander Mcqueen.
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ anụ ọhịa na-atọ ụtọ na-adọrọ mmasị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie n'egbugbere ọnụ na azụ nke Saint Laurent.
A na-eji nkume ọlaọcha chọọ ya, ndị sneakers na-acha ọcha si Valentino na -eṅomi akwa.
A na- ebipụta akwụkwọ agụgharị na-enweghị atụ nke na-etinye ezigbo ákwà na akpụkpọ ụkwụ nke Axel Arigato.
Ejiji Sneakers Vans
A ma ama akpụkpọ ụkwụ a ma ama na afọ 1966 site na ọgụgụ isi Paul Van Doren. Ezigbo sneakers nwere ọhụụ pụrụ iche. Ha nwere nnukwu nchekwa ("wafer") nke ihu nke otu, oghere dị warara dị larịị ma ọ dịghị ncha akwa. Dịka iwu, na ụdị ọ bụla e nwere akara aha na ntinye ma ọ bụ na labeelu, nke dị n'èzí. Enwere mgbochi ntinye na ntinye nke di iche na isi ihe. E gosipụtara na palette mara mma. Ndị a bụ akpụkpọ ụkwụ maka ndị na-enwe ekele maka impeccable àgwà, nkecha imewe na nkasi obi.
Adidas sneakers ejiji
Nke a abụghị mkpa ọ bụla. Site n'inye akwa egwuregwu na akwa akwa na akpụkpọ ụkwụ, o meriri ịhụnanya zuru ụwa ọnụ. Akpụkpọ ụkwụ nke ụlọ ọrụ a, dịka akpụkpọ ụkwụ nke ụdị ndị ọzọ, nwere ihe ndị dị iche iche nke ha: ha bụ ibe dị iche iche nke atọ dị n'akụkụ akụkụ dị iche ma ọ bụ kwekọọ na isi. Adidas sneakers ụmụ nwanyị mara mma bụ ihe na-enweghị atụ, ezigbo nkasi obi na ihe bara uru. Jiri nlezianya na-eburu ha uwe, ị ga-egosi ndị ọzọ na ị maara ọtụtụ ihe gbasara ejiji. Nchịkọta ọhụrụ ahụ gụnyere:
Ụdị ndị uwe ojii na-eji OrthoLite na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma;
Ndị na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ nwere ihe ịchọ mma dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, n'ụdị pigtail site na ụrọ na-enweghị isi;
ndị sneakers ndị ọzọ, na mgbakwunye nke akụkụ nke oge a, bụ nke mbụ e bipụtara na 1987.
Ndị na-agba chaa chaa mara mma Gucci na-enwe mmasị na njedebe nke oge. N'elu akpụkpọ ụkwụ ahụ, e nwere akwụkwọ a na-apụghị ịkọwapụta nke ụdị Italian dị n'ụdị mpempe akwụkwọ ndụ ọbara ọbara ma ọ bụ mbipụta na ihe ndị ahụ na mkpịsị mbụ nke onye guzobere GG ejiji ejiji. Nchịkọta ọhụrụ ahụ nwere ụdị na-egbuke egbuke ma dị iche iche. Ụdị akpụkpọ ụkwụ ndị a ga-emesi àgwà gị, njirimara na, n'ezie, ihe ịga nke ọma. Maka na ngwaahịa ndị a abụghị iche na nnweta, ya mere, ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịzụta azụta a, mana nke a bụ akpụkpọ ụkwụ kacha mma, ha ga-ejere gị ozi karịa otu oge.
Ndị na-agba ịnyịnya nwanyị Nike
Ndị na-agba chaa chaa mara mma Nike na-eyi ihe ọ bụla, n'ihi na ụdị ụdị a bụ ihe niile, dị irè ma dị jụụ. Ha na-anọdụ ala n'ụzọ dị nkasi na ụkwụ, otu ahụ nwere àgwà ọma nke ọma, ya mere ọ dị mma ịkwaga n'obodo ahụ, gba ọsọ, na-agba ịnyịnya ígwè. Ụdị a akwụsịghị ijuanya na ihe ngwọta na-adọrọ mmasị ma na-enweghị ngwọta. Na laconism niile nke ụdị ha pụrụ iche, chetara ọdịdị ga-enye onyinyo nke exclusivity. Obi ụtọ na eziokwu ahụ na nchịkọta na-enye ma dị ala ma dị elu . Ya mere, na omume ị nwere ike ịnọ n'oge ọ bụla n'afọ.
Kedu ihe ị ga-eji edo edo?
Ụzọ ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ na uwe
Ụdị ụdị maka uwe
Uwe - ụdị nke 80-90 afọ
Kedu ihe agba ụrọ na-arụ?
Pants maka ụmụ nwanyị abụba - ụdị kachasị mma na ihe ị ga-eyi?
Izu iri abụọ na asaa - mmeghari nwa ebu n'afọ
Tank maka okpomọkụ ịsa
Ịkwụ ụgwọ na Anita Lutsenko
Igbu onwe onye - ihe kpatara ya
Kedu otu esi wepu nzacha siri ike?
Na-ejupụta na cheese cheese maka dumplings
Ude nke karọt ofe
Ebe a na-atụgharị ya n'ahụ
Kedu ihe na-ejedebe?
Kedu afọ ole nwamba ga-eto?
Kedu calorie ole dị na ugu?
French buns - Ezi ntụziaka maka lush na crisp mmiri
Ngwurugwu, ogho ọkụkọ, otu efere nke pasta na kpakpando igbu egbugbu abụọ!
Ibuprofen n'oge ime